GPS-ka, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
GPS macnaheedu waa Nidaamka Meeleynta Caalamka (i.e. system meeleeye caalami ah) waxayna u dhigantaa qalab kasta oo farsamo oo aad ku qaban karto gacmahaaga taasna waxay ku tusineysaa habka marka aad ku safraysid meelaha aan la aqoon. Aaladdaan mobilada leh waa kuwa cajiib ah, gaar ahaan qof aniga oo kale ah oo aan laheyn fikrad wanaagsan oo jihada ah. In kasta oo aaladaha ku saleysan dayax-gacmeedka ay noqdeen kuwa si sax ah sannadihii la soo dhaafay, haddana weli ma ahan kuwo aan la-qaadan karin. Sida taleefanka gacanta, aaladda GPS had iyo jeer ma leh soo dhaweyn.
Waxa kale oo jira tusaalooyin qaarkood oo ay musaafiriinta marin-habaabintooda ay marin-habaabintooda GPS-ka ah oo ay u gaareen goobo aan ahayn bartilmaameedkooda. Xitaa haddii mid ama labo dhacdo ay dhacdo, aaladda GPS runtii waa aalado waa weyn. GPS-ka wanaagsan wuxuu na siinayaa ogaanshaha halka aan joogno wuxuuna naga caawiyaa sidii aan ku gaari lahayn meeshii aan rabnay anaga oo aan lumin. Waxay na siisaa tilmaamo aan ku raaci karno: “Hadda u leexo midig. Bidix u leexo 100 m. Ka leexo fursadda xigta.
Dhowr sano ka hor waxaan safar ku tagey Zorro oo markii aan gaariga ku wadnay aag aan la aqoon oo ka socda Alabama una aaday Missouri, GPS-ka ayaa sii wadey inuu nagu wareejiyo. Laakiin Zorro wuxuu leeyahay dareen jihada aad u wanaagsan wuxuuna sheegay in GPS-ka ay rabeen inay noogu soo diraan dariiqa qaldan. Maaddaama aan si indho la’aan ah aaminsanahay Zorro iyo dareenkiisa jihada, uma maleyneynin waxba markii uu damiyay GPS-ka isagoo jah wareeraya jihada qaldan. Qiyaastii saacad ka dib waxaan ogaanay in GPS ay sax ahayd. Zorro ayaa dib u rogay aaladda mar labaad waxaanan qaadanay go'aan miyir leh oo aan ku dhegeysanno tilmaamaha. Xitaa farshaxan-yaqaanada ugu fiican badiyaa mar walba ma aamini karaan dareenkooda jihada. Taasi waa sababta GPS wanaagsan ay u noqon karto taageero muhiim ah marka aad safrayso.
Marna kala tagin
Masiixiyiintu had iyo jeer waxay ku jiraan safarka. Waxaan u baahanahay GPS fiican oo leh awood ku filan. Waxaan u baahanahay GPS aan nooga tageynin dhexda oo aan meelna ku xirneyn. Waxaan u baahanahay GPS aannaan lumin doonin oo taasna waligeed noogu soo diri doonin jihada khaldan. Waxaan u baahanahay GPS-ka. GPS-kiisa waa Kitaabka Quduuska ah ee inaga caawiya sidii aan ugu socon lahayn wadada toosan. GPS-kiisa wuxuu ka dhigayaa Ruuxa Quduuska ah hageheena. GPS GPS wuxuu noo suurta gelinayaa inaan xiriir toos ah la lahaanno abuurkeenna saacad walba. Waligeen kama tagna hageheena rabbaaniga ah GPS-kiisa waa mid aan la marin karin. Ilaa iyo inta aan Ilaahay la jirno, aan la hadalno oo aan xiriirno xiriirkeenna isaga, waxaan ku kalsoonaan karnaa inaan si nabad ah ku imaan doonno halka ugu dambeysa ee aan higsaneyno.
Waxaa jira sheeko aabe uu wiilkiisa ugu qaado wiil kaynta dhex jiifa. Intii ay halkaa ka maqnaayeen, aabuhu wiilkii ayuu weydiinayaa wiilku inuu ogaado meesha ay joogaan iyo haddii ay khasaareen. Markaasaa wiilkiisii ​​u jawaabay oo ku yidhi, Sidee baan u lumi lahaa, Waan kula jiraa. ”In alla inta aan Ilaah u sii dhowaanno, lunnaan mayno. Ilaahay wuxuu yidhi: "Waxaan rabaa inaan ku baray oo ku tuso jidka aad u socotid; Waxaan rabaa inaan ku indho indheeyo indhahayga " (Sabuurradii 32,8). Waxaan had iyo jeer isku hallayn karnaa GPS-ka Eebbe.